सबै पास हटाउने गृ`ह-मन्त्रालयको निर्ण`य !अरु निणय हेर्न पुरा पढ्नुहोस!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/सबै पास हटाउने गृ`ह-मन्त्रालयको निर्ण`य !अरु निणय हेर्न पुरा पढ्नुहोस!!
काठमाडौं– कोरोना भाइ`रसको संक्र`मण बढे लगत्तै गृह मन्त्रा`लयले एक जिल्ला बाट अर्को जिल्लामा जान क`डाई गरेको छ। गृह मन्त्रा`लयले मंग`लबार एक जिल्ला बाट अर्को जिल्लामा जान जारी भएका सबै सवा`री पास खा-रेज गर्ने निर्ण`य गरेको छ। यो निर्णय बिहीबार देखि लागु हुनेछ।
नेपालमा संक्र`मितको सं`ख्या बढ्न थालेपछि केही खुकुलो बनाइएको लकडाउन थप कडा बनाइने भएको छ । केही दिन अघि सरकारले शर्त सहित ४४ प्रकारका उद्यो`ग खोल्ने निर्णय गरेको थियो । लक-डाउन खु`कुलो गरेको कारणले गर्दा कोरोना भाइ`रस समुदायमा फैलिन थालेको आकँ`लन गर्दै लक`डाउन कडा बनाउने निर्ण`य गरेको हो ।
आज मात्र नेपालमा ७४ जना संक्र`मित फेला परेका छन् । अब भोली देखि एक जिल्ला`बाट अर्को जिल्लामा जान पाइने छैन । गृह मन्त्रा लयका उप–सचिव उमा कान्त अधि`कारीका अनुसार गृह मन्त्रा`लयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी भएका सबै सवारी पास खारेज गरेको छ ।
मुलुकमा कोरोना भाइ रस संक्र`मितको सं`ख्या बढिरहेका बेला गृहले मंग`लबार दिउँसो यो निर्णय गरेको हो । सञ्चार कर्मीको हकमा भने सूचना विभागको परिचय-पत्रका आधारमा आवत-जावत गर्न दिइने गृहले जनाएको छ । केही दिन देखि लक-डाउन खुलेको झल्को दिनेगरी राजधानीका सडकमा सवारी साधनको भिड ला`ग्न थालेको थियो ।
प्रधान-मन्त्री केपी ओली मंगल बारको बैठकमा कोरोना रोकथाम तथा निय न्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयो`जक ईश्व`र पोखरेल र सदस्य रहेका मन्त्रीहरुसँग रिसाएका थिए । ‘तपाईंहरुले खुकु`लो पारौं भन्नु भयो । यो भावनामा डुबेर निर्णय गर्ने बेला होइन’, प्रधान`मन्त्रीको भनाइ उद्धृ`त गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘मान्छे नै रहेन भने आर्थिक गतिवि`धि खुला गरेर के हुन्छ ? पहिला मान्छे बाँच्नुपर्छ ।